7 top uPVC Column Pipe dia manasongadina fantatrao - Vinyl Pipe - Vinylpipe
Ny tetik'asa fitantanana rano mampiasa paompy rendrika dia miankina betsaka amin'ny fantsona tsanganana mba hamoahana ny rano amin'ny fantsakana amin'ny fomba mahomby. Raha izany, ny fiantohana ny kalitaon'ny fantsona andry ambony dia tena ilaina tokoa. Aiza no misy fantsona tsanganana uPVC tonga any milalao.
Ny fantson'ny vinyl dia manana fitambarana metaly maimaim-poana izay mahazaka fanoherana ny harafesina, harafesina ary simika, izay manome antoka ny fanaterana rano avo lenta hatrany!
Ao amin'ny Vinyl, mifantoka amin'ny fanomezana fantsona uPVC avo lenta sy maharitra ho an'ny mpanjifanay izahay hanatsarana ny fampiasam-bolany amin'ny fitantanana rano.
Andeha hojerentsika ireo singa manan-danja 7 amin'ny fantsom-pifandraisana uPVC, izay manampy ny tetikasan'ny orinasa paompy hahomby, hahomby ary haharitra kokoa.
1. Tsy misy fihenjanana
Mba hiantohana ny faharetana sy ny tanjaky ny fantsom-pivoaranay amin'ireo tetikasanao amin'ny fantsakana rano, dia mampihatra dingana fanampiny amin'ny fandrindrana sy ny fizotran'ny hafanana izahay. Io koa dia manala ny fihenjanana anaty amin'ny vokatra ka mahatonga azy io tsy misy fihenjanana. Ny toetran'ny mekanika an'ny fantsom-panafody dia mihombo, mahatonga azy ireo haharitra kokoa ary tsy dia atahorana loatra amin'ny faneriterena ivelany.
2. Orientation bi-axial
Ny fandalinana ny filàn'ny fantsom-pisondrotana mahazaka fiatraikany amin'ny tetikasan'ny fitantanan-drano dia nandany taona maro tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary namolavola fantsom-pandrosoana miaraka amina orientation bi-axial izahay. Ny teknolojian'ny Vinyl dia mampitombo ny tanjaka amin'ny fantsona ary mampihena ny fitomboan'ny triatra, ka mahatonga azy io tsy ho voan'ny fiatraikany be. Io dia mamela ny fantsakana rano hahomby kokoa amin'ny faharetana lava kokoa noho ny fantsom-by !.
3. Famolavolana endrika manokana
Amin'ny fampiharana ny teknolojia farany, ny fizotrany ary ny fitaovana farany, ny fantsona uPVC dia namboarina tamin'ny famolavolana endrika manokana hanoherana ny tsindry hydrostatic anatiny ary koa ny lanjan'ny tsanganana sy ny paompy. Izany dia manatsara ny fampiasan'izy ireo amin'ny tetikasanao mandritra ny fotoana maharitra, na dia efa namaha na nanamafy ny kofehy fantsona aza izy ireo, ary naharitra dimy taona mahery izy ireo.
4. Fampiharana enta-mavesatra indroa
Araka ny voalaza, ny fantsom-panafody dia tsy maintsy miaritra ny tsindry ambony sy ny enta-mavesatra, anatiny sy mihombo. Indrindra amin'ny tranga misy ny fantsona voalohany mifandray amin'ny paompinao dia mety hahatratra 35 kg / cm izany2 ny tsindry hydrostatic.
Toy izany koa, ny fantsona ambony indrindra dia tsy maintsy manohana ny lanjan'ny fantsom-panafody iray manontolo manatitra rano, ary koa ny paompy, izay mety hahatratra 2 taonina. Noho izany, ny fampiharana enta-mavesatra roa, izay endri-javatra tsy manam-paharoa amin'ny fantsona Vinyl, dia mamela ny tetikasan'ny paompinao hanoherana an'io tsindry io mandritra ny fotoana maharitra.
5. Teknolojia fanidiana herinaratra
Ny fiarovana sy fiarovana ny tetikasa fantsakana feno rano dia tena zava-dehibe. Mba hanamorana ny fiarovana an'ity rafitra ity dia tonga ny fantsom-pifaneraseranay uPVC miaraka amina teknolojia fanidiana herinaratra mitondra enta-mavesatra sy enta-mavesatra, ka manamafy ny fanamboarana borewell manontolo.
6. 100% maimaim-poana
Mba hahatonga ny fantsona mahatohitra ny famoahana dia ampiasain'ny teknolojia O-peratra sy LPR koa izy ireo. Miaraka amin'ny rafitry ny hidy herinaratra, manome antoka izy ireo fa tsy misy rano mitete 100% ny fantsona. Noho izany amin'ny alàlan'ny fampiasana fantsom-pitetezana uPVC, ny tetik'asa fitantanan-drano anao dia afaka mampihena ny fivoahan'ny rano sy ny fako amin'ny rano.
7. Tsy misy firaka sy vy mavesatra
uPVC fantsona tsy misy firaka sy mavesatra vy, izay mahatonga azy ireo mahatohitra ny harafesina ary koa ny fihetsika simika. Io dia ahafahanao manatitra rano madio sy mahasalama 100% ho fanjifana, amin'ny alàlan'ny fiantohana ny fenitra avo lenta amin'ny rafitra fanaterana.
Mbola mampiasa ireo fantsona GI taloha izay mora harafesina ve ianao?
Ireo endri-javatra manan-danja amin'ny fantsom-pifandraisana uPVC dia mahatonga azy ireo ho tsara indrindra amin'ny tsena amin'ny filàna fitantanana rano.
Raha mitady faharetana maharitra, fahombiazana, kalitao ary fahombiazana ianao, aza mitady lavitra noho ny Vinyl. Ny fametrahana ny fantsom-pivoaran'ny uPVC dia afaka manampy amin'ny fampitomboana ny tombony ara-tontolo iainana sy vola amin'ny tetik'asa fitantanan-drano anao!
Liana te hahafantatra bebe kokoa momba ny fantsom-pifanarahana uPVC?
Download katalana Raha mila fanazavana fanampiny.